Sabuurradii 8: Sayidkii rajo-laawayaasha, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Sida cad cadawga wuu silcaa oo waxaa ka buuxsamay dareen rajo beel, David wuxuu helay geesinimo cusub asaga oo xasuusto kan Ilaah yahay: «Eebbada weyn, Eebaha Qaadirka uumay, kan daryeela kuwa aan awooda lahayn iyo kuwa la dulmiyay inuu ka dhex shaqeeyo iyadoon la xakameyn ».
Kanu waa sabuur Daa'uud u tiriyey Gitit. Sayidow, amiirkeenna, Oo magacaagu quruxdaaduu ku dhex muujiyey, oo waddammada oo dhanna waad wada ammaantaan. Afka carruurta yaryar iyo tan dhallaanka waxaad xoog uga siisay cadaawayaashaada aawadood inaad cadowgaaga baabi'isid iyo kii hunguri weynaanta aargudashada ah. Markaan samada arko, oo farahaagu shaqaynayo, dayaxa iyo xiddigaha aad diyaarisay: Waa maxay nin aad u xusuusataa isaga, iyo wiil aad u xannaanaysaa? Waxaad isaga wax yar ka hoosaysiisay Ilaah, Oo waxaad isaga hoos ugu dhigtay sharaf iyo sharaf. Oo waxaad isaga ka dhigtay inuu gacantaada u sarreeyo, oo wax kasta oo cagihiisa hoostoodanaad ku sameysay, idihii, iyo lo'dii, iyo xayawaankii duurjoogta ahaa, iyo haaddii samada, iyo kalluunka badda ku jiray, iyo wax alla wixii badda dhex maraaba. Sayidow, sayidow, sayidow, Magacaagu sidee buu ugu fiican yahay dalalka oo dhan! (Sabuurradii 8,1: 10). Bal aan hadda ka fiirsano safkan Sabuurka ee sadarka. Ammaanta Rabbiga: "Sayidow, taliyeheenna, Sidee baa magacaaga ammaan ugu leh dalka oo dhan, oo aad u sarrayso haybadda ammaanta leh oo jannada ku jirta"! (Sabuurradii 8,2)
Bilowga iyo dhamaadka gabaygan (Aayadaha 2 iyo 10) waa ereyadii Daa’uud, oo uu ku muujiyey sida sharafta u leh magaca Ilaahay - haybadda iyo haybadda ammaanta oo u sii ballaadhan abuurkiisa oo dhan. (taas oo ay kujirto cadaawayaashii sabuuradda!). Xulashada ereyada "Sayidow, taliyeheenna" ayaa si cad u caddeysay. Magaca ugu horreeya ee "Sayid" waxaa loola jeedaa YHWH ama Rabbiga, oo ah magaca saxda ah ee Ilaah. “Amiirkeenna” macnaheedu waa Sayid, ama boqoradda ama sayidkiisa. Isku soo wada duuboo, natiijooyinkani waxay ka dhalanayaan muuqaalka qof shakhsi ah, Eebbe xannaaneeya, kaas oo mas'uul ka ah xukunka saxda ah ee abuurkiisa. Haa, wuxuu fadhiyaa fadhiisi (jannada) jannada dhexdeeda. Kanu waa Ilaaha Daa'uud la hadlay, wuuna u duceeyaa, sida Sabuurrada inteeda kale, oo uu qaynuunnadiisa u soo bandhigo, oo rajo ka muujiyo.
Awooda Rabbiga: «Afka yar iyo carruurta yar yar waxaad siisay xoog cadaawayaashaada aawadood inaad cadowga ka baabi'isid iyo kii hunguri weyn ee aargudashada» (Sabuurradii 8,3).
Daa’uud wuxuu la yaabay in Ilaah, Sayidku, uu ka faa’iideysanayo xoogga “murugada” ee carruurta (Xoog ayaa ka tarjumaysa ereyga Cibraaniga oo lagu tarjumay xoog Axdiga Cusub) si loo burburiyo ama loo joojiyo cadowga iyo hunguri-weynaha aargudashada. Waxay ka hadlaysaa Sayidku inuu xooggiisa aan dhammays tirnayn ku dhigo lugo aamin ah adoo adeegsanaya carruurtan tabaaleysan iyo dhallaanka. Miyay tahay, si kastaba ha noqotee, inaan fahamno sharraxaaddaas macno ahaan? Ma cadawga Ilaahay cadawtinimadiisa caruurta? Waxaa laga yaabaa, laakiin waxay u badan tahay, David inuu ku hoggaamiyo yar yar, diciif ah oo aan awood lahayn oo leh carruur xagga dareenka tusaalaha ah. Wuxuu la kulmay waji gabax (Awooda) Awoodda shaki la'aan waxa ay ku baraarugtay daciifnimadiisa, sidaa daraadeed waxay u tahay dhiirrigelin isaga in la ogaado in Sayidku, abuuraha xoogga badan iyo taliyuhu, uu adeegsado kuwa aan awood lahayn oo lagu dulmiyay shaqadiisa.
Abuurkii Rabbiga: "Markaan arko Samooyinka, Farahaaga shaqeeya, Dayaxa iyo Xiddigaha aad diyaarisay: Waa maxay nin aad u maleyneyso isaga iyo ilmaha aadanaha oo aad u daryeeshaa?" (Sabuurradii 8,4: 9).
Fikradaha Daa'uud hada waxay u weecdeen runta weyn ee ah in Rabbiga, Ilaaha Qaadirka ah, nimcadiisa, uu uga tagay qayb ka mid ah boqortooyadiisa dadka. Marka ugu horeysa, wuxuu aadaa shaqada hal abuurka weyn (oo ay ku jiraan cirka ... dayaxa iyo ... xiddigaha) sida shaqada farta Ilaah ka dibna wuxuu muujiyaa sida uu u la yaabay ninka finalka ah (Erayga Cibraaniga ah waa enos oo macnaheedu yahay qof dhimanaya, qof tabar daran) ayaa lasiiyay mas'uuliyad badan Su'aalaha ku saabsan aayadda 5aad waxay ku nuuxnuuxsadeen in ninku yahay uun abuur aan lagaranaynin adduunka oo dhan (Sabuurradii 144,4). Oo weliba Ilaah aad buu u xannaaneeyo isaga. Waxaad isaga wax yar ka hoosaysiisay Ilaah, Oo waxaad isaga hoos ugu dhigtay sharaf iyo sharaf.
Abuuritaanka Eebbe ee dadka waxa lagu metelaa sida xoog, shaqo mudan; maxaa yeelay, binu-aadmiga waxaa laga sameeyey wax yar oo Ilaah ka sii hooseeya. Cibraaniga Cibraaniga ah waxaa lagu soo daabacay Kitaabka 'Elberfeld' oo leh "malaa'ig", laakiin laga yaabee in tarjumaadda "Ilaah" laga doorbido halkan. Muhiimadu waxay tahay in nin loo abuuray dhulka inuu noqdo taliye Ilaah isagu iska leeyahay. oo la saaray wixii ka hooseeya abuurista, laakiin ka hooseeya kan Ilaah. Daa’uud wuu la yaabay in Ilaaha Qaadirka ah u magacaabey nin dhameystiran oo caynkaas ah. Sabuurradaan waxaa lagu soo qaatay Cibraaniyada 2,6: 8 si loo barbardhigo nin guuldarradiisa iyo mustaqbalkiisa quruxda badan. Laakiin wax walbana weli waa lumiyeen: Ciise Masiix, Wiilka Aadanaha, waa Adam-kii ugu dambeeyay (1 Korintos 15,45:47,), wax walbana isaga ayaa ka hooseeya isaga. Dawlad si buuxda u noqon doonta run marka uu jidh ahaan ugu soo noqdo dhulka si uu ugu diyaariyo dariiqa jannada cusub iyo dhul cusub oo sidaas lagu dhammaystiro qorshaha Ilaaha Aabbaha ah, dadka iyo dhammaan abuurista kale si loo kordhiyo (ammaaneen).
Oo waxaad isaga ka dhigtay inuu gacantaada kuu sarreeyo, wax walbana cagihiisa hoostoodii ku sameeye, ido iyo lo 'weligood, iyo dugaagga duurjoogta ah, iyo haadda hawada ka hooseysa, iyo kalluunka baddaba, iyo wax kasta oo badda ku dhex socda.
Halkaa markay marayso David wuxuu galay booska ragga isagoo ah taliyeha Ilaah (Steward) gudahiisa abuurkiisa. Ka dib markii Qaadirku abuuray Adam iyo Xaawo, wuxuu faray inay dhulka xukumaan (Bilowgii 1:1,28). Dhammaan waxyaabaha nool waa in iyaga lagu adeecaa. Laakiin dembiga awgiis, sharcigaan weligiis si buuxda looma fulin. Nasiibdarro, ficilka foosha xumaa wuxuu ahaa inay si sax ah u tahay abuur hoosaad, abeeso, taas oo ku kalliftay inay ka soo baxaan awaamirta Ilaahay oo ay diidaan aayaha ay damacsanaayeen. Rabbiga ammaanta leh: Sayidow, sayidow, taliyeyow, Magacaagu ammaan buu ku leeyahay dalka oo dhan. (Sabuurradii 8,10).
Sabuurradii waxay ku dhammaatay sidii ay u bilaabatay - iyada oo lagu ammaanayo magaca ammaanta Ilaah. Haah, oo runtii ammaanta Rabbiga waxaa laga muujiyaa daryeelkiisa iyo socodsiintiisa, taasoo ninku ku arko inuu wanaagsan yahay iyo daciifnimo.
Aqoonta David ee jacaylka Ilaah iyo daryeelka dadka, sida aan ognahay, waxaa si buuxda loogu qancay qofka iyo shaqadii Ciise ee Axdiga Cusubi. Halkaas waxaan ku baranaynaa inuu Ciise yahay Sayidku mas'uul hadda yahay (Efesos 1,22:2,5; Cibraaniyada 9). Boqortooyo insaqi doonta adduunka mustaqbalka (1 Korintos 15,27). Sidee raaxada iyo rajada u leh inaan ogaano taas, inkasta oo dhibaatadeena iyo karti la’aanteena (wax yar marka la barbar dhigo baaxadda balaaran ee dunida) waxaa aqbalay Sayidkeenna iyo Sayidkeenna inay wadaagaan oo ku wada filnaato haybadda ammaanta uu u leeyahay abuur kasta.